अाज १४ जेठदेखि काठमाडौंं यसरी हुँदैछ ठप्प, के खुल्छन् के खुल्दैनन् ? – Naya Kura Daily
अाज १४ जेठदेखि काठमाडौंं यसरी हुँदैछ ठप्प, के खुल्छन् के खुल्दैनन् ?
विदेश जाने आउनेले पासपोर्ट र टिकटको आधारमा सवारी साधनको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । संचारकर्मीलाई सूचना विभागको पास अनिवार्य गरिएको छ । सूचना विभागको पास नभएकाले सम्बन्धित संचारमाध्यमको सिफारिसपछि सिडियो कार्यालयबाट पास लिनुपर्नेछ
Prevएकाबिहानै सरकारले विद्यालय संचालन गर्न मिति तोक्यो, यति गते देखि खुल्दैछन् विद्यालयहरु?
Nextनेपालमा पनि ‘ब्ल्याक फंगस’ बढ्दो, औषधि अभाव